people Nepal » विवाह गर्दा के फाइदा, नगर्दा के फाइदा ? विवाह गर्दा के फाइदा, नगर्दा के फाइदा ? – people Nepal
Posted on December 26, 2017 by Durga Panta
बिवाहका शैली, मान्यता, संस्कार, प्रचलन भूगोल र समुदाय अनुसार भिन्न भिन्नै छ । यद्यपी दुई बिपपिरत लिंगी आपसमा बैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छन् । जसको प्रचलन संसारभर छ । यो प्राकृतिक प्रकिया नै हो ।
बिवाह किन त ? यसमा भने सबैको मत मिल्छ भन्ने छैन । कसैले विवाहलाई सृष्टीको अनिवार्यता मान्छन् त कसैले स्वेच्छिक विषय ।
विवाहले तनाव साझेदार
रोगहरु टाढा भाग्छन्
विवाह नगर्दाका बेफाइदा